Date: 22 janvier 2018 - 09:57
Inona kay no tokony hatao raha hanalehibe filahina,misy fanafody azo hanina ve sa tambavy sa exercice tokony hatao...sns.?
Re: Fanalehibeazana filahiana
Date: 22 janvier 2018 - 12:52
Sao dia mbo diso rubrique letia nareo zany an?
Date: 22 janvier 2018 - 16:15
hoeto eny @67ha @ Mme noela ho rohitiny otran'ny tsinaikena tsy ho lava ihany ve ny farany ,raha tiana ho botabota eto eny @ Mr Aina eny itaosy fa izy bota² mahay mahabotabota,raha tihana hihasa haingana eto eny @ tictak dou ,raha tiana ho be ranony hoeto eny @ grotte ny msé Feno fa feno rano ny grotte ny,tetezo ireo di complet tsara
Date: 23 janvier 2018 - 14:50
Bjr letsy ry trandraka
Tsy diso rubrique letia za satria ny antony mahatonga ahy miteny an'io dia:voalohany aloha ny vadiko mihitsy no mila an'io sady mampirisika ny fanaovana azy io.faharoa torohevitra no ilaiko fa tsy moral na fanakianana avy aminareo raha azo atao.
Date: 23 janvier 2018 - 20:13
Aza dia manaonao foana eh !
Rehefa tsy aretina no azo amin'ireny dia lasa impuissant ny hiafarana !
Izay vao tena hialan'ny vadinao tanteraka eo ianao !!!
Date: 25 janvier 2018 - 11:30
Mitadiava vhv kely lavaka sady tery no marivo dia @ izay tsy mila manaonao foana
Date: 25 janvier 2018 - 11:33
sahala ny taborin-jaza ngah ny an'lisany zany ????
Date: 25 janvier 2018 - 12:25
Mamonoa tena ra tsy zaka tsoun ny fiainana fa tsy mi exista ny solution mirakla ry bonbon pecto ah
Date: 25 janvier 2018 - 14:56
tsy famonoan-tena anie no nitadiavako vahaolana eto fa fanalehibeazana filahiana ry Ratefaka e.fa rehefa tsy mahita hevitra ianareo dia aza tsy miresaka eto mihitsy fa samy manana ny fiainany ny olona sy izay zavatra ilainy na tadiaviny aza fa nanaonao foana amin'izany famonoan-tena izany fa fahotana mahafaty izany ary mankany amin'ny fahaverezana mandrakizay izay olona manao izany.Fa ny fanalehibeazana filahiana tsy fahotana akory izany sady ny vadiko ihany no mila an'io fa tsy olon-kafa akory.
Date: 25 janvier 2018 - 15:04
Ka vahaolana mihitsy ny famonontena rehefa tsy mety aminareo ny mihonona @zavatra nomen'ny nature anareo ka. Aza manonofy fa tsy misy solution afatsy izay.
Date: 25 janvier 2018 - 22:42
Otry ny gaga ihany aho lesy amin'ny réaction an'ialahy, satria tena tsy nisy arrière pensée mihitsy aho raha nilaza tamin'ialahy hoe "sao dia diso rubrique ialahy". Miala tsiny aho raha noraisin'ialahy de travers ilay remarque-ko.
Ho valiako ihany nefa ialahy na izany aza.........Contrairement amin'ny zavatra lazain'ilay ranamana io ambony io hoe "tsy misy solution", dia mety misy ihany ny solution dia ny chirurgie........
Tsy haiko izay toerana misy an'ialahy, fa raha aty an-dafy no misy an'ialahy, dia misy ny atao hoe "Pénoplastie", mety hi répondre ny zavatra tadiavin'ialahy......Autour de 4000 à 7000 euros eoeo ny prix moyen an'io intervention io raha tsy diso aho.
Tsy kivy...... tsy kivy..........
Date: 26 janvier 2018 - 10:57
Tsy azoko !!!
Efa voaporofo fa cancérigènes daholo ny chirugies esthétiques rehetra, "des injections aux prothèses" !
Fa fitadiavam-bola ny azy ka raha mihinana ve ny trondro tsy ho ampiakarina, dia any am-bilany no hiafaràny ?
Date: 26 janvier 2018 - 12:04
mividiana @#$%& n'omby hosory menanaka diloilo côcô tsara,ataovy misafotana menaka be
ny anao aloha no hampidirina dia izy excité tsara iny dia ampidiro @zay ilay an'ny omby iny avy eo aza atao fantany dia hita eo raha tena tia ngendangeda botabota tokotrany izy
Date: 26 janvier 2018 - 21:11
Aza mandany andro eto letsy a ,jereo ao antin'ny nygazety vidy varotra fa be dia be ny mivarotra an'ireny ao .Tandremo fa misoloky ny sasany an ,fa misy tena serieux .
Date: 13 février 2018 - 18:50
Par: botakely e
Date: 02 mars 2018 - 10:49
de lasa filahina bota kely
Par: Gôna be
Date: 03 mars 2018 - 11:27
Mihinana fanafody mampatory , dia asaivo velesin'ny vadinareo amin'ny marteau moramora , amin'izay mivonto tsara , ngeza farak'izay ngeza !!!
Par: Tsy ampy vavy
Date: 26 mars 2018 - 13:49
Mila fanampiana >> maxman,maxosize, vigrx,.. ireo no vahaolana anao, jereo @ midi bonne affaire fa misy mpivarotra an'ireo na any @ FB.
Date: 27 mars 2018 - 14:32
Lanin'ny tkola ny fikan'i Lita ka nandeha dokotera izy,
"Dokotera a, mba vonjeo fa lanin'ny takola ka tena grave be ity; fa raha mety ihany re dokotera dia ilay manaintaina ihany esorina fa ilay mivonto mba avelao ho @ izao ihany"
Date: 03 avril 2018 - 17:29
mbola tadiavina ho kekerin'ny takola hafa ndray aza !
Par: Ny ahiiy
Date: 07 mai 2018 - 19:23
Amiko rahalahy a!
Raha toa ka tsy latsaky ny 12cm ny halavany ny filahianao dia mbola norma a!
Tadidio fa mihitatra sy mifintina toy ny lastika koa io fivaviana io rahalahy a!
Tany am-piandohana ny fanam-badianareo no tokony efa fantatrao faoe:
-clitoridienne ; na
Afaka mihafohy manaraka ny halava na halehibeny lata...kao ny fivaviany raha tsy oe dia efa mihotra manantombo 65cm amin'ny halavanao mijoro mihintsy ny halavan'ny vadinao.
Samihafa manko ny fitondrana ny Clitoridienne sy ny vaginale io.
Tsarovy foana koa fa ny vehivavy dia mila amorser-na 25 a 30 minute ny fellation (orokoroka sy safosafo)vao dangitra sy petsa (mando)toa antsika lehilahy izy ireny ka ahafahana mampiditra ary misy fafiny amin'ny vehivavy.